www.google.com.mm မှာ မြန်မာစာကို မှန်ကန်စွာ မြင်ရရန် | D.မိုးသား
Myanmar daily news, breaking news, what's happening now in Myanmar
ပြည်တွင်းသတင်း ပြည်ပသတင်း Andriod game
ချစ်ရေးချစ်ရာ ကျမ်းမာရေး modelပုံများ ရယ်စရာ
ဘလော့ပညာ ''''လေယာဉ်ပျက်ကျခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမလေးရှားအစိုး ရအတည်ပြု''' သတင်းအပြည့်အစုံ ရာသီလာသော နေ့ရက်တိုင်း လန်းဆန်းနေစေရန် (အမျိုးသမီးတိုင်း ဖတ်သင့်သော စေတနာ့ဆောင်းပါ) မြန်မာနိုင်ငံကို ကားတင်သွင်းရာမှာ ပေးဆောင်ရမယ့် ကညန အခွန်တွေကို သိသိသာသာ လျှော့ပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် အများပြည်သူသိရှိစေရန် အသိပေးနှိုးဆော်ချက် လူ ၅၂၉ ယောက်ကို အီဂျစ် တရားရုံးက သေဒဏ်ချ စစ်သားနှင့် နိုင်ငံရေးသမား ခွဲခြားကြည့်သင့် (နတ်မောက်သားမြွေဟောက်) တစ်ကွက်ကောင်းကာတွန်းလေးများ ရခိုင်တွေ သန်းခေါင်စာရင်းသပိတ် ယနေ. သာသနာ့အလံများ လွှင့်ထူပြီး စတင်ကြပြီ ။ သမိုင်း၏ လစ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရခြင်း နောက်ကွယ်မှာ ဦးနေ၀င်း ပါဝင်ပတ်သက်နေသလား '''ဆရာတော် ဦးဝီရသူ ဦးဆောင်သည့် မန္တလေး မ-ဘ-သအဖွဲ့မှ အတုမရှိ သတင်း ဂျာနယ် ထုတ်ဝေမည်''' 'မုံရွာမြို့ လောကမာရဇိန်ဘုရား မျက်လုံးတော်ပွင့်သည်ဟု သတင်းများဖြစ်ပေါ်'' သမ္မတဖြစ်လို၍မဟုတ်၊ ပြည်သူနှင့်တပ်မတော် တစ်သားတည်းဖြစ်ဖို့ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်လိုဟု ဒေါ်စုပြော Facebook Log Out လုပ်ဖို့ မေ့ခဲ့ရင် .WeChat App ကို ကွန်ပျူတာပေါ်ကနေ Chat လို့ရပြီ . မိန်းကလေးတို့ မေးသော ယောင်္ကျား နှာဘူး အကြောင်း ဖြေရှင်းချက် . ကျွှန်တော်ဆိုဒ်ကို ဖုန်းထဲမှကြည့်ရန် App ဒေါင်းလင့်ယူပါ
ကိုလတ်(ကျွှဲဆင်း နည်းပညာ) ဒီမိုးသား
Gmail / G talk
Home » နည်းပညာအလန်းလေးတွေ
» www.google.com.mm မှာ မြန်မာစာကို မှန်ကန်စွာ မြင်ရရန်
www.google.com.mm မှာ မြန်မာစာကို မှန်ကန်စွာ မြင်ရရန်
Thuyaaung Thuyaaung Thuyaaung
မှာ မြန်မာစာကို မှန်ကန်စွာ မြင်ရရန်နှင့် Myanmar Unicode Kayboard ပုံကိုဖေါ်၍ ကြည့်ပြီးရိုက်ကြရအောင်.... အရင်ဆုံး Mozilla Firefox ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။အပေါ်ထောင့်က Menu ဖြစ်တဲ့ Firefox ကို နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါ Add-ons ဆိုတဲ့အထဲကို ဝင်ပါ။ အပေါ်ထောင့်က Search ထဲမှာ tagu plugin လို့ ရေးပြီးရှာလိုက်ပါ။ ( တန်ခူး ) ဆိုပြီးဆော့ဝဲထွက်လာပါမယ် install လုပ်ပေးလိုက်ပါ သင့်Browser တွင် Unicode ဖောင့်ကို မှန်စွာမြင်ရသွားပါပြီ ( မမြင်ရပါက ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ ok သွားပါမယ် ) Myanmar Unicode Kayboard ကိုဖေါ်၍ ကြည့်ပြီးအရိုက်လေ့ကျင့်ရအောင် www.google.com.mm
သို့ဝင်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ ( Google.com.mm offered in: မြန်မာဘာသာ ) ဆိုတဲ့ စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ ။ Search အကွက်၏ ညာဘက်ထောင့်မှာ ကီးဘုတ်ပုံလေးတွေ့ပါမယ် နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့ကွန်ပြူတာ မှန်သားပြင်စခရင်ပေါ်မှာ ပုံထဲကအတိုင်း Unicode Kayboard ရိုက်နည်း ပုံလေးထွက်လာပါပြီ Myanmar Unicode လက်ကွက်ကြည့်၍ သင် အရိုက်လေ့ကျင့်လို့ရပါပြီ။ မလုပ်တတ်ဘူးဆိုပါက လုပ်နည်းဗွီဒီယိုကို ဒီမှာနှိပ်၍ ကြည့်ပြီးလုပ်နိူင်ပါတယ် https://www.youtube.com/watch?v=qXUXwmbdnP8Google Chrome သမားများအတွက် Myanmar Unicode ကို မှန်စွာမြင်ရအောင်လုပ်နည်းလေးပါ Google Chrome ရဲ့ Menu ထဲဖြစ်တဲ့အထဲကိုဝင်လိုက် Settings ထဲဝင်လိုက်ပါ။ Extensions ထဲဝင်လိုက်ပါ။
အဲဒီထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ get more extensions ဆိုတာကိုတွေ့ပါမယ် နှိပ်လိုက်ပါ။ chrome web store ထဲရောက်သွားပါပြီ tagu plugin လို့ ရေးပြီးရှာလိုက်ပါ။ ( တန်ခူး ) ဆိုပြီးဆော့ဝဲထွက်လာပါမယ် install လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ သင့်Browser တွင် Unicode ဖောင့်ကို မှန်စွာမြင်ရသွားပါပြီ ။ ( မမြင်ရပါက ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ ok သွားပါမယ် )အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ.....။ မှတ်ချက် ။ ။ Unicode ဆော့ဝဲသွင်းထားပြီးပြီဆိုရင် ယူနီကုဒ်မသုံးထားပဲ ရိုးရိုးရေးထားတဲ့ဆိုက်တွေက မမှန်တော့ပါဘူး။ယူနီကုဒ်အသုံးပြုပြီး ရေးထားတဲ့စာတွေပဲ မှန်တော့မှာပါ ။ အရင်လိုပြန်မှန်ချင်တယ်ဆိုရင် ယူနီကုဒ်ဆော့ဝဲကို ပြန်ဖျက်စရာမလိုပါဘူး ။
ကျနော်လုပ်နည်းရေးထားတဲ့အတိုင်းပြန်ဝင်လိုက်ပါ ပြီးရင် Extensions ထဲဝင်လိုက်ပါ ။
ကိုယ်အင်စတောလုပ်ထားတဲ့ ကောင်တွေတွေ့ပါမယ်။ အဲဒီမှာ ( တန်ခူး ) ဆော့ဝဲက Disable ဆိုတာကို နှိပ်ပြီးပိတ်လိုက်ပါ Enable ဆိုပြီးပြောင်းသွားပါမယ် ။
အဲလိုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင် ကိုယ်ကြည့်နေတဲ့ဆိုက်က မမှန်ဘူးဆိုတဲ့လင့်ကို Reflash လုပ်ပေးလိုက်ပါ ပြန်မှန်သွားပါပြီ ။ ဒါမှမဟုတ်လဲ Browser ကို ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ အရင်လိုမှန်သွားပါပြီ ယူနီကုဒ်နဲ့ရေးထားတဲ့ဆိုက်ကစာတွေမှန်အောင်ပြန်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပြန်သွားပြီး Enable ဆိုတာကို နှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော် အားလုံးပဲ အဆင်ပြေပါစေ....။
လွမ်းဦးမောင်(မြောင်းမြသားလေး)ရဲ့ဘလော့လေးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့အားပေးနေကြသော မိတ်ဆွေအားလုံးကိုရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ကျေးဇူးးတင်ပါတယ်ဗျာ..တုန့်ပြန်မှု့တစ်ခုအနေနဲ့ တောင်းဆိုမှု့တစ်ခုတော့ပြုပါရစေ...သူငယ်ချင်းရဲ့ဝေဖန်အကြံပေးမှု့နဲထပ်တူညီမျှတဲ့ ကွန်မန့်လေးကိုထားရစ်ခဲ့စေချင်ပါတယ်...
Friday, May 17, 2013, Add Comment
0 Response to "www.google.com.mm မှာ မြန်မာစာကို မှန်ကန်စွာ မြင်ရရန်"
မိတ်ဆွေရဲ့ ထင်မြင်ချက်လေးကို ရေးသွားနိုင်ပါတယ် မိတ်ဆွေ၏ဝေဖန်မှု့သည်ရိုင်းစိုင်းမှု့များမပါလျှင်ဖော်ပြပေးသွားပါမည်ကျွှန်တော်ဆိုဒ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်အကြံပြုချင်တာဘဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုမေးမြန်းချင်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် dmoethar@gmail.com ကိုအပ်ပြီးဝေဖန်အကြုံပြုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ဆိုဒ်နဲ့တင်တဲ့ပိုစ့်တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အဆင်ပြေတယ်ဆို မိတ်ဆွေကတစ်ဆင့် သူများတွေကို ပြန်ပြောပြပေးပါ အဆင်မပြေရင် ကျွှန်တော်ကိုပြောပါ dmoethar@gmail.com ကိုအပ်ပြီး သိလိုသည်များကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဗျာ Admin~~ဒီမိုးသား(dmoethar@gmail.com)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြေ၀ယ်ခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းကိစ္စများ ထိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား သတိပေး
၀တ်မှုံရွှေရည် ရဲ့ ဟန်မူရာအမျိုးမျိုး လက်တလော နာမည်ကြီးနေသည့် မခင်ဝင့်ဝါ (ဓာတ်ပုံ - ၁၆ ပုံ)
gtalk ထဲမှာဘာသာစကားမတူတဲ့သူတွေနဲ့ chat ခြင်သူတွေအတွက် စကားပြန် လေးတွေ.
ဆယ်တန်းအောင်မြင်သူများ ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ မြို့မငွေငန်း ပြင်ဆင်နေပုံနှင့် ရှားပါးဓာတ်ပုံများ လွတ်လပ်စွာပေါက်ကွဲနိုင်ပါတယ်
သက်မွန်မြင့် သက် သက်မွန်မြင...
မိုးယုစံ အိမ်ယာမဲ့လေးမို့ ဘယ်သူများ မွေးစားချင်လဲ မသိဘူးနော် Email Thi ...
၀တ်မှုံရွှေရည် ရဲ့ ဟန်မူရာအမျိုးမျိုး သူလေးက.ငယ်ငယ်ကတည်းက.ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော် ကျွှန်တော့ဝက်ဆိုဒ်ကိုလာအားပေးတဲ့ကောင်မလေးတွေလောက်တော့ချောပါဘူးနော့ ကမ္ဘာကျော်ကွန်ဖူးမင်းသာ...
မိန်းမပျက်ထက်ပိုသော နန်းသီရိမောင် ရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ ရှမ်းလူငယ်(ရန်ကုန်)၏ မော်ဒယ်လ်နန်းသီရိမောင်နှင့် ပတ်သက်သော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် .....။ (၁) နန်းသီရိမောင်သည် နိုင်ငံနှင့် လူမျိုး ဘာသာ သ...
အင်တာနက်ပေါ်မှာခေတ်စားနေတဲ့ ပြေတီဦး၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် တို့ရဲ့ မိသားစုဓါတ်ပုံလေး အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပြေတီဦး၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် တို့ရဲ့ မိသားစုဓါတ်ပုံလေးကို တွေ့ရပြီး ဒီဓါတ်ပုံကို ပရိသတ်တွေက တအားသဘောကျကြပါတယ်။ ဒီဓါတ်ပုံ ရို...
Facbook Like လုပ်ခဲ့ပါ
Design by Dmoethar - www.dmoethar.com